Tsiahy 9/11 : Fahaterahana Taranaka Vaovao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Septambra 2011 14:51 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 日本語, বাংলা, Italiano, Español, русский, 繁體中文, 简体中文, Deutsch, македонски, Ελληνικά, English
Mozea New York 9/11 CC avy amin'i PeterJBellis
Niserana ny folo taona taorian'ny fanafihana voarindra nataon'ny al-Qaeda tamin'i Etazonia ny 9/11 ; nanimba ny fomba fandraisan'ny Tandrefana tamin'ny Afovoany Atsinanana io fotoana iray io, nanova ny fihetsika nanoloana ny Islamisma ary nampidirana lalàna sy fanao vaovao teo amin'ny sehatry ny dia sy ny fiampitana sisintany. Izany rehetra izany dia voaresak'ireo tanora avy amin'ny lafy valon'izao tontolo izao navoaka tamin'ny alalan'ny andiana lahatsary fohy mamakafaka ny vanim-potoana manaraka ny 9/11.
Nonina tany Texas i Salmaa Elshanshory nandritra ny fotoana nisian'ny fanafihana, ary amin'ny maha-Amerikana Miozolomana azy dia tsapany avokoa na ny fijery miiba nateraky ny tsy fahalalana na ny fanohanana, fahatsaram-po sy fanomezan-tanana nataon'ny fiaraha-monina niara-nifarimbona hanampy ny olo-tsy fantatra taorian'ny fanafihana. Aleony kokoa mieritreritra ny iray taranaka aminy ho ilay nianaran'ny olona nijoro teo akaikin'ny olo-tsy fantatra miatrika ny mety ho tsy ampoizina ary mihetsika amin'ny fomba miabo.
Hisham Almiraat avy ao Maraoka [Fononteny: mpiara-misa ato amin'ny Global Voices Online i Hisham] mahatsiaro fa tsy mahasolo tena amin'ny maha-miozolomana sy maha-Arabo azy: tsy amin'ny governemanta ihany, izay nanadino ny hanaiky fa misy ny olona izay tsy manohana ny fanafihana nataony, fa amin'ny mpampita vaovao sy ny mpanafika ihany koa izay nanambara fa nanao betsaka amin'ny anaran'ny Arabo. Folo taona taty aoriana hitany fa nihena ny lazan'ny fitondrana jadona Arabo sy ny fitiavana befahatany mbamin'ny fironana politika mikombona, fa mitombo lanja kosa ny hetsi-bahoaka mitolona sy miezaka ny manala ireny fitondrana ireny hanoloana azy amina fiaraha-monina mitovy tantana kokoa.
Cristina Balli any Texas nahatsiaro ny tahotra nanjaka tamin'ny fiaraha-monina nisy azy sy ny nanendrikendrehana ny sisintany ho toerana mampidi-doza. Lasa zavatra natao hampatahotra izany mpifindra monina izany amin'ny ankapobeny ka nampifanandrina anay tamin'ny toerana misy azy ireo, na dia tsy niampita hatrany amin'ny sisintany mampisaraka an'i Etazonia sy i Meksika aza ny mpanafika ary tsy nisy idiran'ny fiaraha-monina samihafa ilay fanafihana. Nivadika ho rindrina ho an'ny taranaka nifandimby ilay sisintany nisiana fifanakalozana kolontsaina nifamezivezena soa amantsara teo taloha, ary nolazainy fa tena niantraika lalina tamin'ny fahavitrihana izany ary nanova ny fomba fiainana teo an-tanànany ihany koa.
Mbola misy ny lahatsary azo jerena ao amin'ny vohikalan'ny Generation 9/11 video project [tetikasa lahatsary taranaka 9/11]. Ity tetikasa ity dia ifandrimbonan'ny British Council's Our Shared Future sy ny Transatlantic Network 2020 .
Lahatsoratra anatin'ny takelaka manokana Tsiahy Global Voices 9/11.
Hajian-tsary mampiseho ny ‘WTC Tribute in Light’ na ‘Fanomezam-boninahitra Trano Kambana anaty Hazavana’, 11 Septambra 2008. Saripika mpisera Flickr milkmit (CC BY-NC-ND 2.0).